Ururka al-Shabaab oo Sheegtay Iney dalka Kenya ka Dileen 20 Askari | SAHAN ONLINE
Ururka al-Shabaab oo Sheegtay Iney dalka Kenya ka Dileen 20 Askari
Ururka Al-Shabaab ayaa maanta sheegtay in dalka Kenya ka dileen Labaatan askari ka dib weerar ka dhacay Tuulada Yumbis oo ka tirsan Ismaamulka Gaarisa.
Ciidamada la dilay ayaa la sheegay in weerar gaadmo ah kala kulmeen dagaalyahano ka tirsan Ururka al-Shabaab ,waxaana weerarkan uu dhacay xalay habeenimadii.
Dhimashada askartan ayaa laga cabsi-qabaa iney ka tiro badato dhimashada la sheegayo ,waxaana mid kamid ah Xildhibaanada Gaarisa oo la yiraahdo Mahad Cismaan sheegay in Gawaarida la weeraray mid kamid ah miino haleeshay.
Dagaalyahanada kooxda al-Shabaab ayaa maalmo hore Masaajid kuyaala dalka Kenya gaar ahaana deegaanka Ijaara/Gaarisa Muxaarado u jeediyey dad farabadan oo ku sugnaa Masaajidka.
Af-hayeenka Ciidanka Difaaca ee Kenya KDF Koronel David Obonyo ayaa sheegay in sheegay in Ciidankooda ka tirsan hawlgalka Midowga afrika ee AMISOM 7 dagaalyahan al-Shabaab ah dileen hubna ka qabsadeen.
Sidoo kale ,waxaa la sheegay in Ciidanka la weeraray ay kasoo baxeen magaaladda Xagardheer iyagoona ku raadjoogay dagaalyahano al-Shabaab ah oo maalmo ka hor Mucaadaro ka jeediyey deegaanka Ijaara/Gaarisa.
Ururka al-Shabaab ayaa xooga saaray weerarada ay ka dhex fuliyaan gudaha dalka Kenya ka dib markii sanadkii 2011 ay Ciidamada dalka Kenya gudaha u galeen dalka Soomaaliya.